OEM / ODM - Guangzhou Yun Yang Ntecha Co., Ltd.
Big Ụdị Series
Série acide Hyaluronique
Anti-ịka nká & wrinkles
Dark tụrụ &-acha ọbara ọbara
Dark okirikiri & Puffiness
N'ibuli & Firming & Slimming & ịhịa aka
Nācha ọbara-ọbara & uche
Otutu & Oil Control
Ọbara & kachasi mkpa
Anya & Lip elekọta
Hand & Isi elekọta
The Usoro: Private Label
gị ngwaahịa nhọrọ
Ịhọrọ ngwaahịa gị skincare akara nwere ike ịbụ na ihe karịrị nke usoro, ma anyị ihere sales enyi na-ịmata zụrụ na-eduzi gị site na usoro na ala. Ha na-akụziri ịjụ ajụjụ, ekwe ka ị na-ewu gị ngwaahịa selections effortlessly na ịmata; mgbe akpachara nzute mkpa nke gị clientele.You ga-atụle anyị dum akara nke elu formulations, ị na-ahọrọ gị ngwaahịa na ịtụ samples ebe dị mkpa iji nwalee gị na ngwaahịa tupu nhọrọ. Ma, e nwere mgbe a ụgwọ maka gị ngwaahịa alo.
Buru gị Packaging
Ozugbo gị ngwaahịa selections e họọrọ, akaụntụ gị onyeisi ga-eduzi gị site na anyị na nkwakọ nhọrọ. mgbe ọ pụrụ ịbụ na a na-emenye ụjọ ozi, anyị ga-eme ka ọ dị mfe maka gị. Mgbe a ole na ole isi ajụjụ banyere gị ọhụụ na mmefu ego, gị ahịa na-akpakọrịta ga-enyere gị họrọ a nso nke ngwaahịa nkwakọ nhọrọ ike a cohesive, na-ika anya.
E gị Brand Identity
Ugbu a, na gị onwe labelụ skincare ngwaahịa na-ahọrọ na gị nkwakọ họpụtara, ị ga-akpali na-ekwu banyere gị ika. Ọ dị mkpa na ị na-aghọta WHO ị na-ere na, dị ka nke ọma dị ka onye ị na-dị ka a na ụlọ ọrụ, na ike a anya na resonates na ị na gị ahịa.
Emebe gị Packaging
Ozugbo gị mbọn e guzobere, na gị ngwaahịa na mbukota họọrọ, anyị ga-ibugharịa na emebe gị nkwakọ. Na YunYang ịchọ mma, nke a bụ ihe karịrị na-agbakwunye a logo na a preexisting labelụ, nke a bụ a imewe usoro ịsụgharị gị ika jidesie gị skincare ngwaahịa.
Anyị imewe otu ga chepụta onye nsụgharị nke gị kpọọ gị ka ị electronically nyochaa ma-enye nzaghachi. Anyị streamlined okike usoro bụ ma irè na oru oma, huu gị ndị kasị turnaround oge o kwere omume.
Ahịa & ere Your Product
Anyị nkwado anaghị akwụsị naanị n'ihi na ị natara gị ọhụrụ onwe labelụ skincare akara. Anyị otu nke gụrụ akwụkwọ ọkachamara ga-anọgide na-enye gị na ozi na nduzi dị mkpa ka ị irè n'ahịa ma na-ere gị na ngwaahịa. Site anyị online mgwa database, ka anyị na-arụ ọrụ skincare ọkachamara, anyị ga-enye gị ozi na ị chọrọ ịga nke ọma na skincare ahịa.
Maka ozi ọzọ na Private Label na otú ka malitere, kpọtụrụ anyị na gị akaụntụ ọhụrụ nnọchiteanya ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka.
YunYang ịchọ mma ga na-enye gị elu, ọgwụ ọkwa skincare ngwaahịa maka oji labeelu. Mgbe ihe karịrị afọ 15 na ọkachamara skincare ụlọ ọrụ, anyị na ngwaahịa nwere, ghọrọ usoro si afọ nke nnyocha, ule na nzaghachi.
N'oge ndị a afọ abụọ gara aga, anyị kwubiri na ihe kacha mkpa akụkụ nke onwe labelụ usoro a na-n'ịhụ na anyị na-aghọta gị, gị ika, na ihe mgbaru ọsọ gị - nnoo, gị ọhụụ. Ọ bụ ya mere anyị ukwuu zụọ ahịa ọkachamara na-arụ ọrụ na ị na-eduzi gị site na onwe labelụ usoro; na-arịọ nri ajụjụ nyere nka nke zuru okè ngwaahịa akara gị klientele.
Na YunYang ịchọ mma, anyị na-elekwasị anya bụ na ịga nke ọma nke gị skincare akara, anyị na-agba mbọ ka uku gị anya ọ bụla nzọụkwụ nke ụzọ.
Ndenye Product Turn Around Times
Mara Skincare ọkachamara
Na-ụlọ Graphic Designer Team
Professional nkwakọ nkwanye
Free Product Ozi & Training
Nke 18, West Street, Fourth Economic Cooperative, Dali Village, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou
Ihu Nkpuchi , mpempe akwụkwọ Nkpuchi , whitening ọbara, Ihu Nkpuchi mpempe akwụkwọ , Matcha Mbat Nkpuchi , Face Nkpuchi mpempe akwụkwọ ,